Parole Media Player: isingaremi uye yakavhurwa sosi mutambi | Linux Vakapindwa muropa
Parole Media Player: isingaremi uye yakavhurwa sosi mutambi
Kuburitswa kwemafaira edu e multimedia kwakakosha mune chero sisitimu yekushandisa, yeizvi Tine kwatinoshandisa akawanda mafomu akatarisana nebasa iri. Pakati pezvakawanda zvatinogona kuwana, tinogona kuzvipfupikisa muzvikamu zviviri: izvo zvakakwana nemabasa mazhinji uye nerutsigiro rwekushambadzira masevhisi, mazhinji acho neaya ari nyore uye anotarisa pabasa ravo.
Mune ino kesi isu ticha taura nezve multimedia player iyo inongotarisa pane yayo huru basa kunova kuburitswa kwenhepfenyuro kuchisiya parutivi ese iwo mabasa ari mamwe ekugadzirwa kwenhau.
1 About Parole Media Player
2 Maitiro ekuisa Parole Media Player paLinux?
About Parole Media Player
Parole mutambi wemultimedia yakakwana, yemahara uye yakavhurwa sosi yakagadzirirwa zvakananga iyo Xfce desktop nharaunda, asi zviri pachena kuti inoshandawo mune mamwe maratidziro nemamiriro edesktop atinogona kushandisa muLinux.
Pindai hunhu hukuru ndiko kureruka uye pamusoro pezvose, Tsigiro yemavhidhiyo uye eodhiyo faira mafomatipamwe nekugona kubata DVD Vhidhiyo yekutamba.
Pamhando dzakakurumbira dzatinogona kutamba neParole media player iwe yaunowana: AVI, MP4, MPGE, MKV, WMV, FLV, MP3, AAC, WMA, pakati pevamwe vakawanda.
Parole Iyo ine rutsigiro rwemapulagi ayo atinogona kuwedzera kuwedzera mashandiro ayo, izvi zvinoita kuti tiwane chiitiko chiri nani nemutambi uyu.
Uyewo, iko iko iko iko iko iko mushanduro yayo 1.0.1 iyo yakasvika mavhiki mashoma apfuura neshanduko dzinotevera dzakatenderedza vhezheni yayo yapfuura yaive 0.9.
Yakareba yakamira kukanganisa "Haikwanise kutanga Xv kuburitsa" yagadziriswa
Zvino, "autoimagesink" inoshandiswa kune "otomatiki" vhidhiyo yekubuda sarudzo. Uyu anogamuchira anopa yakanakisa kunyura (maererano neGStreamer) yenzvimbo inowanikwa, uye inofanirwa kuburitsa yakanakisa mhedzisiro zvisinei nekugadziriswa.
Nezve kururamisa kwekukanganisa tinogona kuwana zvinotevera:
Yakagadziriswa 32-bit tsaona kana uchishandisa MPRIS2 plugin
Kupunzika kuri pa «Bvisa nhoroondo» bhatani rakagadziriswawo
Appdata kuvimbiswa kwave kushanda
Yakagadziriswa yakazara debug inovaka uye yakajeka kupaza kuvaka yambiro yakagadziriswa
File icon yakatsiviwa ne freedesktop.org inoenderana sarudzo
Maitiro ekuisa Parole Media Player paLinux?
Si unoda here kuisa iyi media player pane yako system Iwe unofanirwa kutevedzera anotevera matanho maererano neako Linux kugovera iwe yauri kushandisa.
Para avo vanoshandisa Debian, Ubuntu 18.04 kana kumwe kugovera kunobva mune izvi unogona kuisa media player neinotevera rairo.
Tinofanira kudaro vhura terminal uye unomhanya mairi:
Ini ndinotarisa pane yeUbuntu 18.04 vhezheni sezvo mushanduro dzakapfuura vanogona kuwana mutambi nemirairo imwe chete yekuti kune vashandisi veXubuntu havazokwanise kuwana mutambi, saka zvakafanira kunge muchishandisa yazvino vhezheni yesystem.
Nokuda kweizvi kana mutambi asingadaro yakaiswa nemurairo iwoyo zvinogona kuitwa nekuwedzera inotevera repository:
Isu tinogadziridza iwo mapakeji uye zvinyorwa:
Y pakupedzisira tinoisa ne:
Yenyaya ye lIvo avo vanoshandisa Arch Linux, Manjaro, Antergos kana chero chinobva kuArch Linux yekuisa mutambi ane:
Panguva ye ivo vashandisi veCentOS, RHEL, Fedora kana chero chinobva, isu tinoisa ne:
sudo yum install parole
Pakupedzisira, kwaarikuvhuraSUSE vashandisi vanoisa ne:
sudo zypper install parole
Kune zvimwe zvekugovera Tinogona kuwana iyi multimedia player nekurodha pasi nekunyora kodhi yekodhi yekushandisa. Isu tinoita izvi nekuenda kunotevera chinongedzo kwatino dhawunirodha yazvino vhezheni vhezheni. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Kana kubva kune iyo terminal yatinofanira kuitisa:
Iye zvino tinosunungura ne:
tar xvf parole-1.0.1.tar.bz2
Finalmente tinounganidza mutambi uye nekuiisa ne:
Pakupedzisira, tinogona kuzviita na:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Parole Media Player: isingaremi uye yakavhurwa sosi mutambi
Ndinovimba vanoshandisa plugin kuti vatangezve kutamba vhidhiyo kubva kwavakasiya, senge Dragon Player kana VLC Player. Kunyangwe iyo VLC ficha isisashande pane yazvino Gnome uye KDE desktops; pamwe nekuda kwekukonana naWayland.
Krita 4.1, nyowani nyowani yemahara yedhijitari pendi software
Linux Mint 19 Tara inosvika iine nhau, zvigadziriso nezvimwe